‘मीठै पकाउँछु म’ - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
‘मीठै पकाउँछु म’
जेष्ठ ३, २०७४-एमी ज्याक्सन बेलायती मोडल/नायिका भए पनि ठूलो पर्दामा उनको प्रवेश भारतमा भएको हो । अझ दक्षिण भारतीय फिल्ममार्फत । १८ वर्षको उमेरमा तमिल फिल्ममा देखिएकी उनी त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै हिन्दी फिल्ममा आइन् ।
तेलुगु भाषाको समेत गरी एघार फिल्म खेलिसकेकी यी सुन्दरीले अभिनयमा त्यस्तो छाप छाड्ने काम भने गर्न सकेकी छैनन् । गत वर्ष उनले नवाजुद्दिन सिद्दिकीजस्ता अभिनेताको अपोजिटमा खेल्न पाएकी थिइन् । तर ‘फ्रिकी अली’ ले पनि उनलाई सफलता चखाएन ।
अभिनय सोखजस्तो मात्रै भइरहेकाले होला, उनले रेस्टुराँ व्यवसायमा हात हाल्ने सुर गरेकी छन् । यद्यपि कतिपय सफल नायकनायिका पनि फिल्ममा मात्रै भर परेका भने छैनन् । एउटै क्षेत्रमा भर गरिरहनु बुद्धिमत्ता पनि होइन । दुइटा डुंगामा खुट्टा राख्नु हुन्न भन्ने मान्यताले अचेल कहाँ काम दिन्छ र ? अचेल त जतिसक्दो धेरै डुंगामा फैलिनुपर्छ । ‘यो नभए त्यो’ को विकल्प राखिरहनुपर्छ ।
धेरैजसो मुम्बईमै बस्ने गरे पनि यी २५ वर्षेले रेस्टुराँ भने लन्डनमा खोल्न लागेकी हुन् । बलिउडमा व्यस्त श्रीलंकाली सुन्दरी ज्याकलिन फर्नान्डेजले गृहनगर कोलम्बोपछि मुम्बईमै रेस्टुराँ सुरु गर्न कमर कसेपछि एमीलाई त्यस्तै रहर पलाएको हो ।
‘म जहिल्यै आन्ट्रप्रेन्योर हुन चाहन्थेँ,’ एमीले एउटा भारतीय अनलाइनसँग भनेकी छन्, ‘विश्वभरिका रेस्टुराँ चहार्नु र फरकफरक स्वाद चाख्नु मेरो सोख हो । हस्पिटालिटी सेक्टरमा आफैँ पनि केही गर्न चाहन्थेँ । खानाप्रति आफ्नो अथाह प्रेमले नै मलाई आफ्नै रेस्टुराँ खोल्न उक्साएको हो ।’ आफूलाई जे पनि खान मन लाग्ने र तौल बढे पनि चिन्ता नलाग्ने भन्दै उनले थपेकी छन्, ‘मलाई पकाईतुल्याई गर्न पनि मज्जा लाग्छ । परिवारजन र साथीहरूका अनुसार म मीठै पकाउँछु रे ।’
लन्डनमा हालै आयोजित एसियन अवार्ड समारोहमा पहिरनका कारण सबैको ध्यान खिच्न सकेकी एमीको अलटाइम फेभरिट खानेकुराचाहिँ कुन होला ? पिज्जा । उनैले भनेकी ।
के छ ब्यालेट बक्सभित्र ? ›